Sweden Qofkii labaad oo u dhintay Talaalka Corona Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden Qofkii labaad oo u dhintay Talaalka Corona
Sweden Qofkii labaad oo u dhintay Talaalka Corona
January 13, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Maamulka caafimaadka ee Uppsala ayaa ku wargaliyay Hay’ada daawooyinka ee Iswiidhan geerida qof waayeel ah oo ku dhintay guri gaar ah oo loogu talagalay waayeelka maalin kadib markii lagu tallaalay tallaalka Corona.
Masuuliyiintu waxay tilmaameen in qofkaasi waayeel yahay oo uu la ildaran yahay cuduro badan. “Ku wargalinta arinta Maamulka Dawooyinka waa mid caadi ah,” ayuu yiri madaxa dhaqtarka daryeelka dhaw Robert Christianson. Qofka dhintay wuxuu ahaa 97 sano jir mana aragno wax aan caadi aheyn oo kiiska ku saabsan, laakiin maadaama tani ay tahay markii ugu horeysay ee ay tan ka dhacdo Uppsala, waxaan dooneynaa inaan noqono kuwa hufan. Sida maanta laga soo xigtay TT.
Waxyeellooyinka suurtagalka ah
Hay’adda daawooyinka waxay heshay warbixinno ku saabsan waxyeelada tallaalka ee daryeelka caafimaadka iyo shakhsiyaadka labadaba. Laga soo bilaabo Talaadadii, hay’addu waxay baartay wadar ahaan 38 looga shakisan yahay waxyeelo.
“Kuwani waa kiisas la tuhunsan yahay oo keliya,” ayay tiri Veronica Arthurson, oo ah sarkaal ka tirsan Maamulka Dawooyinka. “Kaliya soo sheegista macnaheedu maahan inay calaamadaha cudurka yihiin.”
Inta badan dhibaatooyinka laga shakisan yahay ayaa la filayay, sida madax xanuun, falcelinnada maxalliga ah ee goobta duritaanka, daal, dhaxan, iyo qandho, ”ayay raacisay. Waxaa jiray waxyaabo la tuhunsan yahay oo ay u arkeen qoreyaasha inay ka sii daran yihiin kuwaas oo qaarkood horay loo yaqaanay.
Shan dhimasho ah ayaa laga soo sheegay Iswiidhan ka dib markii tallaalka ay qaateen dadkaasi, laakiin xiriir toos ah oo sababa geerida tallaalka weli lama xaqiijin karo, sida ay sheegtay Hay’adda Daawada. Dhammaan dadka dhintay waxay ahaayeen dad da ’ah oo la il-daran hal ama in ka badan oo nooc cudur ah. In kasta oo aysan jirin wax caddeyn ah in tallaalku uu yahay sababta dhimashada, Maamulka Maamulka Dawooyinka wuxuu baaraa sababta dhimashada wuxuuna u diraa warbixinno keydka xogta Yurub si uu gacan uga geysto dadaallada wadajirka ah ee lagula soconayo daawooyinka Midowga Yurub